ka ny Loholona Pierrot Rajaonarivelo Filohan’ny Vaomiera Fifandraisana iraisam-pirenena no nisolo tena ny antenimierandoholona Malagasy. Fivoriana nokarakarain’ny vondron’ny Banky Iraisam-pirenena (GBM) izay miara-miasa amin'ny parlemantera, mba hijerena miaraka ireo fepetra izay tokony ho raisin’ny parlemantera ho fanatsarana ny vokatra aterik’io valanaretina Covid-19 io amin’ireo firenena marefo sy misedra olana. Nifantoka tamin’ireo paikady hamoronan’asa ho an’ny vondrom-bahoakam-paritra ; ny ho fisian’ny fitomboan’ny famatsiam-bola ho an'ny fotodrafitr’asa fototra ; ny fomba fanatanterahana ireo fifampiraharahana, amin’ny maha mpikambana ao amin’ny GBM, ny fananganana ireo rafitra fitantanana famatsiam-bola mifandraika amin’ny filàna firenena iray,… ny fanontaniana napetraka. Noresahana ihany koa ny mety ho anjara asan'ny fiarahamonim-pirenena iadiana amin'ny FCV (fragilité, conflit, violence) amin’ity Covid-19 ity, ny anjara andraikitry ny Parlemantera amin’ny fanaraha-maso ireo famatsiam-bola ataon’ny GBM mba isian’ny fahombiazana,…